शारिरीक सम्पर्क गर्दा किन महिलाले आखाँ चिम्लिन्छीन ? - NayaMedia:: Naya Media । Leading Nepali News Portal
शारिरीक सम्पर्क गर्दा किन महिलाले आखाँ चिम्लिन्छीन ?
आइतवार, जेष्ठ २६, २०७६ (June 9, 2019, 8:55 am) मा प्रकाशित
आइतवार, जेष्ठ २६, २०७६, काठमाण्डाै ।
यौन सम्पर्कको बेला खासगरी पुरुषहरुको मनमा एउटा प्रश्न उठ्छ, आखिर महिलाहरु किन आँखा चिम्लन्छन् ? कतिपयले आँखा बन्द नगर्न सक्छ । यदि आँखा बन्द गर्दैन भने केही न केही यौन समस्या छ भनेर पनि बुझ्ने गरिएको छ । त्यसो भए के यौन सम्पर्कको क्रममा महिलाले आँखा चिम्लनैपर्छ ? किन उनीहरु आँखा चिम्लन्छन् ? के छ यसको कारण ?